SEPPALA SIBERIAN SLEDDOG DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Sary natolotry ny Seppala Kennels, Rossburn, Manitoba
Raha ny Seppala taloha dia karazany iray ihany amin'ny Siberian Husky ankehitriny, dia raisina ho karazany hafa samy hafa ny fisehony. Seppalas no tsipika miasa ary ny Siberia Huskies no tsipika fampisehoana. Lava kokoa ny tongony sy ny vatany ary maivana kokoa amin'ny lanjany sy manorina izy ireo amin'ny ankapobeny noho ny alika fampisehoana. Ny sofina dia lava noho ireo ao amin'ny tsipika fampisehoana, napetraka akaiky kokoa ary mahitsy. Ny fijanonana dia voafaritra kely noho izay ao amin'ireo tsipika fampisehoana. Ny rambony dia tazonina ambony ao anaty fiolahana an-damosin'ny lamosina rehefa mailo. Ny palitao dia salantsalany amin'ny halavany ary matevina miaraka amin'ny akanjo lava saika lava ny akanjo ivelany. Ny lokon'ny palitao dia miovaova ary tsy heverina ho zava-dehibe amin'ny karazany. Ny loko palitao mahazatra dia misy fotsy madio, buff, buff ary fotsy, mainty, volondavenona, volondavenona, volondavenona, volondavenona ary volom-boasary (mena misy volo mpiambina mainty sy orona mainty). Ny fandokoana Piebald sy ny loko agouti (karazana bibidia) dia mahazatra. Ny sasany manana tarehy mainty fotsy ihany amin'ny tongony sy tendron'ny rambony. Ny maso dia mety ho manga na volontany, na izay fitambaran'izy roa.
Ity dia karazan'asa miasa mavitrika izay ho mailaka sy hampiofana rehefa omena fanatanjahan-tena ampy. Alika matanjaka be io, indrindra raha mbola tanora. Seppalas dia tena manan-tsaina sy mora zahana, saingy ny didiny ihany no hajon'izy ireo raha hitany fa mahery kokoa noho izy ny olombelona. Raha tsy mampiseho fahaiza-mitarika ilay mpitantana dia tsy ho hitany ny dikany amin'ny fankatoavana. Training mila faharetana, tsy fitoviana ary fahatakarana ny toetran'ny alika Arctic. Raha tsy ianao no alika 100% mafy orina, matoky tena, tsy miovaova mpitarika entana, hanararaotra izy, lasa fanahy iniana sy ratsy toetra . Seppalas manao tsara mpiara-milalao jogging , raha mbola tsy mafana loatra. Tia midradradradra ity karazana ity ary mankaleo mora foana. Tsy mandeha tsara raha avela irery mandritra ny fotoana maharitra tsy misy fanatanjahan-tena mialoha. Seppala manirery, na Seppala tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana afaka manimba be . Tadidio fa tena miasa ny Seppala amboa silety ao am-po sy fanahy. Tsara amin'ny biby hafa izy ireo raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely, fa te hihaza biby lalao kely. Seppalas dia mpihinan-kanina ary tsy mila sakafo firy noho izay antenainao. Tia mandehandeha ity karazany ity. Ny Seppalas dia afaka manao namana mahafinaritra ho an'ny olona izay mahalala ny zavatra antenaina amin'ireo biby tsara tarehy sy manan-tsaina ireo ary vonona ny hametraka ny fotoana sy angovo aminy.
Hahavony: 22 - 23 santimetatra (56 - 58 cm)
Lanja: 40 - 50 pounds (18 - 23 kg)
Mora tohina, cancer sy ny olana amin'ny maso.
terrain scottish terrefana afovoany Andrefana terrier mix
Matetika izy ireo dia tsy atolotra amin'ny trano fonenana, na izany aza dia afaka mipetraka ao amin'ny trano izy ireo raha tsara fiofanana sy ampiasaina tsara. Ny Seppala Siberian Sleddogs dia tena mihetsika ao anaty trano ary manao ny tsara indrindra amin'ny tokontany misy fefy sy fefy lehibe. Noho ny palitaony mavesatra dia aleon'ireto alika ireto ny toetrandro mahafinaritra. Ny olona iray dia tokony hampiasa fahiratan-tsaina momba ny fitazonana azy ireo amin'ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanomezana alokaloka sy fifehezana rivotra ampy. Ity karazana ity dia aleony miaina anaty fonosana.
Mila fanazaran-tena betsaka ny Seppala Siberian Sleddog. Rehefa tsy misintona sled dia mila farafaharatsiny isan'andro ny karazany MANDEHANA na jogging, fa tsy tokony hanaovana fanatanjahan-tena tafahoatra amin'ny toetr'andro mafana.
lalao bred amerikana pitbull terrier
12-16 taona eo ho eo.
Ny palitao dia nilatsaka indroa isan-taona. Mandritra izany fotoana izany dia mila borosina sy tohina isan'andro izy ireo.
Ny Seppala Siberian Sleddog dia teo am-boalohany ny karazany mitovy amin'ny Husky Siberia . Io foana no tsipika fiasan'ny karazany ary tsy nampiasaina velively tamin'ny peratra fampisehoana. Rehefa nivoatra bebe kokoa noho ny hatsaran-tarehiny ireo alika peratra fampisehoana ary tsy dia kely loatra tamin'ny fisarihana sled, dia nijanona ho alika miasa tokoa ny Seppala Siberian Sleddog. Ny ra-drazana dia tazonina tsy hitovy amin'ireo alika fampisehoana. Tamin'ny faran'ny taona 1990 dia neken'ny tompon'andraikitra fambolena kanadiana ho karazany vaovao ny karazany. Tamin'ny taona 2002, ny tsipika Seppala Siberian Sleddog dia niparitaka tany Etazonia rehefa niasa ny mpiompy mba hitazonana ireo tsipika fiasa tsy hisaraka amin'ireo tsipika fampisehoana.
alika an-tendrombohitra bernese sy mifangaro rottweiler
Seppala Siberian Sleddog puppy, sary nahazoana lalana avy tamin'i Seppala Kennels, Rossburn, Manitoba
teritery omby pitondra amerikana
sary terrier fotsy fotsy Andrefana
fifangaroan'ny dane basset hound mahafinaritra
sary puff crested sinoa